Amathuluzi ama-7 Asebenziseka Kakhulu Wokuthuthukisa Ukuzibandakanya Kwewebhusayithi Martech Zone
ULwesithathu, April 17, 2019 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 23, i-2021 UJason Grills
Eminyakeni embalwa edlule, ukusetshenziswa okwandisiwe kwemidiya yedijithali ngamakhasimende kushintshe indlela izinkampani ezimaketha ngayo imikhiqizo yazo. Amabhizinisi anemizuzu embalwa nje yokubamba izivakashi futhi alawule amandla azo okuthenga. Njengoba kunezinketho eziningi ezitholakala kumakhasimende, inhlangano ngayinye kufanele ithole ukuhlangana okuhlukile kwamasu wokumaketha azoqinisekisa ukwethembeka kwamakhasimende kumkhiqizo wabo.
Kodwa-ke, wonke lawa masu manje agxile ekwakheni nasekuqhubekeni nokwenza ngcono ukuzibandakanya kwewebhusayithi. Siqoqe ezinye zezizathu zokuthi ukubandakanyeka kwamakhasimende kuthathwa njengokuza kuqala ngaphandle nje kokuba umgomo wokugcina wawo wonke amasu wokumaketha.
Ngokusho kwendatshana ekhishwe ngu Forbes, ngaphezu kuka-50% wamakhasimende ajabule ukukhokha imali ekhokhelwayo ngomuzwa omuhle womkhiqizo
Ngenkathi omunye udaba olushicilelwe ngu lifehack ithi amakhasimende athembekile azokhokha kuze kufike ku-25% ngaphezulu kwalabo abangaqiniseki
I-athikili efanayo neLifehack iphinde ithi ngaphezu kwamaphesenti angama-65% amakhasimende athenga imikhiqizo ngokususelwa ekwelashweni nasenduduzo yawo kumasayithi athile
Yize amasayithi amaningi ethandwa, iningi lamakhasimende alijabule ngenani lemininingwane etholwa ekugcineni. Lokhu kukhombisa ngokusobala izinkampani ukuthi kufanele zigxile kakhulu ekunikezeni imininingwane efanele kanye / noma umyalezo ngesikhathi esifanele ukuze zibe nomthelela omkhulu. Uma ucabanga ukuthi amawebhusayithi amaningi asezingeni eliphakeme athola izivakashi ezingaphezu kwe-100,000 unyaka ngamunye ngokwesilinganiso, iminyango yezentengiso ayikwazi ukunganaki ngisho isivakashi esisodwa. Ngenhlanhla, kunamathuluzi ambalwa angasiza ku- ukufeza ukwaneliseka kwamakhasimende. Ake sizibheke ngezansi.
7 Amathuluzi Asebenzisekayo Athuthukisa Ukuzibandakanya Kwewebhusayithi
1. Izibalo: Amasu wokumaketha asebenzisa idatha ukwenza imikhankaso emisha yezikhangiso ukuthuthukisa ukuzibandakanya kwamakhasimende. Ngenxa yamathuluzi we-analytics, izinkampani manje sezikwazi ukuthola amaphuzu amaningi wedatha. Imiphumela etholakele ingasetshenziselwa ukuklama nokuthumela imiyalezo eyenziwe yaba ngeyakho kumakhasimende abo kumaphoyinti wokuthinta anama-multi-level.
I-analytics yeselula njengethuluzi nayo iyadonsa. Into okufanele uyikhumbule ukuthi iminyango yokuthengisa, i-IT kanye nezokumaketha kumele zisebenze ekhonsathini ukudala imikhankaso emihle. Mningi umsebenzi osaqhubeka kule ndawo njengoba izinkampani zibhekene nezinkinga ezihlobene nokuqaliswa kanye nokubekwa kwabezindaba.
2. Ingxoxo ebukhoma: Ingxoxo esebenzayo iba ngenye yezindlela ezisetshenziswa kakhulu yizinkampani kulezi zinsuku. Futhi ukwenza lokho ngendlela efanele futhi ngaso leso sikhathi, izinhlangano eziningi aziwuyeki umqondo womqondo wesoftware yengxoxo ebukhoma. Kodwa-ke, ngezinketho eziningi kakhulu ezitholakala emakethe akulula ukuxazulula okukodwa. Kepha uma kwenzeka unethuluzi lokusekela elifana ne- Ingxoxo yeProProfs, ukuhlinzeka ukwesekwa okusheshayo kuba ucezu lwekhekhe.
Isoftware yengxoxo ebukhoma ivumela opharetha bakho ukuthi baqonde isimilo sezivakashi futhi baqale ingxoxo esebenzayo ngesici esifana ne-Chat Sanibonani. Lokhu akugcini nje ngokugqugquzela inzuzo yokuxhaswa osheshayo kepha futhi kwakha nesipiliyoni sokwesekwa komuntu siqu kwabavakashi. Njengoba kunezici eziningi ezisebenza ngokubambisana, ibhizinisi lakho lingaqinisekisa ukuhlala kwezivakashi futhi liyakuqedela ukuthenga ngokuya ngemiyalo yakho yo-opharetha.
Ukuxhaswa Kwamaselula: Izinhlelo zokusebenza zeselula ziya ngokuya zijwayeleka njengoba zisebenziseka kalula futhi zinikeza ngomuzwa othuthukisiwe wokuthenga kumakhasimende. Eqinisweni, abathengisi abaningi banikeza izaphulelo ezinyenyile kubasebenzisi bohlelo lokusebenza ukuzigcina zixhumeke ezitolo zohlelo lokusebenza, noma usohambeni.
Njengesinye isiteshi sokusekelwa kwamakhasimende, izinkampani ezitshala imali ekusekelweni kohlelo lokusebenza zizokwazi ukunikela ngomuzwa ofanayo futhi ongenamthungo wokuthenga. Qinisekisa ukuthi ikhasimende lakho linikeze imvume yokufinyelela le nketho, ukuze ungangeni ezimpini ezisemthethweni.
4. 24/7 Amathuluzi Okusekela: Kunamathuluzi amaningana umuntu angawasebenzisa ukukhulisa ukuthengisa eziteshini eziningi. Thola eyodwa enhle bese uyisebenzisela ukusiza ukuqondisa amakhasimende noma ngabe inqubo yesinqumo kanye nokuthenga. Lawa mathuluzi angalungiswa kuwebhusayithi yenkampani ukwenza ngcono ukubandakanyeka nezinzuzo eziphakeme.
5. Izinkundla Zokuxhumana: Njengokuba newebhusayithi iyisidingo, kubalulekile ngokufanayo ukubandakanya namakhasimende akho ngokusebenzisa ukutholakala kwemithombo yezokuxhumana okunomthelela. Amakhasimende athanda ukuxhumana nezinkampani nge-Instagram, Pinterest noma kuFacebook –ukusesha kutholile ukuthi abantu bayathenga 40% okuningi uma isethulo nendaba yomkhiqizo muhle.
Khumbula ukuthi akwanele ukuba ne-akhawunti nje kepha kudingeka umuntu ozoyiqapha. Ithimba empeleni lingakusiza ukuphendula yonke imibuzo ikhasimende elingaba nayo futhi liphendule izingqinamba noma imibuzo ngolwazi olufanele. Ngokunikeza amakhasimende akho ithuba lokuthola imininingwane ngokushesha, awukhulisi nje kuphela amathuba okugcinwa kwawo kepha futhi kukhulisa ukuthembeka kwawo kumkhiqizo wakho.
Isici sokuphinda ushaye:Amabhizinisi namakhasimende kufanele benze izinto eziningi eziza kuqala futhi izimpendulo zifunwa ngejubane lejet. Kunezinhlelo inkampani engazifaka futhi izisebenzisele abamele izinsizakalo ukuphatha ulayini wezingcingo. Ngenkathi amakhasimende kungadingeka alinde isikhashana ngaphambi kokuba imibuzo yabo iphendulwe, iqiniso lokuthi bazimisele ukuhlala kulayini likhombisa intshisekelo yabo nokuzibandakanya nomkhiqizo.
7. Ideski Losizo: Leli mhlawumbe ngelinye lamathuluzi abaluleke kakhulu ibhizinisi okungafanele liyekethise kuwo. Sebenzisa uhlelo lwethikithi kusiza ekuxazululeni izingqinamba nasekuhlinzekeni izimpendulo ezidingeka kakhulu ngokushesha. Amathikithi ayindlela enhle yokulandelela inkinga kusuka ekuqaleni kuze kube sekugcineni nokunikeza isixazululo.
Sebenzisa amathuluzi wokuqagela wale nqubo kungabonakala kuwusizo olukhulu njengoba ukulindela izinkinga kusengaphambili kuyingxenye yenqubo. Ukuthola izindlela zokubhekana nezinkinga kuba lula futhi. Amakhasimende ayahlabeka umxhwele uma ibhizinisi lisebenzisa uhlelo olunjalo –kuyinto enhle yokuthuthukisa umkhiqizo futhi ilungele ukwaneliseka kwamakhasimende.
Ukusonga Ukusetshenziswa Kwamathuluzi Asebenziseka Kakhulu angu-7 +
Ngenxa yokuqanjwa kobuchwepheshe, izinkampani eziningi zakha imikhiqizo emisha enikeza izixazululo ezilungele amakhasimende. Labo abakwazi ukuhlala ngaphambi komkhuba ngokutshala imali kumathuluzi afanele, bahlala phambili kwejika ngokuhlangabezana nezidingo zamakhasimende nokubadlula.
Kunezinkampani zezinsizakalo ezinganikeza wonke la mathuluzi futhi zenze kube lula ukuthi ibhizinisi ligxile emisebenzini yalo eyinhloko. Kungani ungasebenzisi ubuchwepheshe obukhona ukukhulisa ukuzibandakanya kwewebhusayithi yakho, ukukhiqiza nokwaneliseka kwamakhasimende - konke ngasikhathi sinye?
Tags: wengxoxo bukhomaukwesekwa kweselulaizibalo zewebhusayithi
UJason uyiSr. Technical Writer okwamanje ehlotshaniswa no Ingxoxo yeProProfs. Uyakujabulela ukubhala ngemikhiqizo esekelayo yokuxhaswa kwamakhasimende, izitayela embonini yokuxhasa amakhasimende kanye nemithelela yezezimali yokusebenzisa lawo mathuluzi. Ngesikhathi sakhe sokuphumula, uJason uthanda ukuhamba kakhulu ukuze afunde ngamasiko namasiko amasha.
I-Anatomy Yencwajana Ye-imeyili